Qarax dad ay ku dhinteen oo ka dhacay Magaalada Baqdaad – STAR FM SOMALIA
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Ciraaq, qarax dad ay ku dhinteen ayaa ka dhacay goob Suuq ah oo ku yaalo Waqooyiga dalka Ciraaq.
Gaari waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyay ayaa la dhigay banaanka goob Suuq ah halkaasi oo uu ku qarxay, waxaana ku dhintay dad badan halka tiro kale ay ku dhaawacmeen.
Ilaa 11 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxaasi, halka tiro kale oo intaasi ka badan la soo wariyay inay ku dhaawacmeen sida ay sheegayso Warbaahinta dalka Ciraaq ka howlgasha.
Goobta Qaraxa uu ka dhacay ayaa ah Deegaanka rashidiyah ee dalka Ciraaq, ilaa hada ma jirto cid sheegatay masuuliyada qaraxaan ka dhacay Suuq ku yaalo dalka Ciraaq.
Booliska oo gaaray goobta ay wax ka dhaceen ayaa waxa ay wadaan baaritaano ku aadan qaraxa dhacay iyo saameynta ka dhalatay.
Dadka ku dhaawacmay Qaraxaasi ayaa waxaa loo qaaday goobaha caafimaadka ee Magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq.
Qaraxyada ka dhaca goobaha Suuqa ah ee dadka ay ka dukaameystaan dalka Ciraaq aad ayuu ugu badan yahay.
Riek Machar oo xabad joojin ku dhawaaqay